ပြတင်းပေါက် updated Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့စက်ကိုမောင်းသူ 10 OS ကို-STORE အားဖြင့် | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဧပြီလ 25, 2017 admin ရဲ့ 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို, သတင်း, OS ကို-STORE, ထုတ်ကုန်များ, နည်းပညာ 0
ကျနော်တို့ပြတင်းပေါက်မောင်းသူ updated ပြီ 10 Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့စက်ကိရိယာများအတွက်.
ပံ့ပိုးမှု device ကို >>>
AT1xxx / AR2xxx / AR5xxx / AR9xxx စီးရီး
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့ Wi-Fi ဆော့ဝဲများအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်.
Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
အဘယျအကို download လုပ်ပါဖို့သေချာမ?
ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆုံး-အသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုသည်. သငျသညျWindows®ရှိသည်သောအားအတည်ပြု 10 install မလုပ်ခင် operating system ကို. သင်၏ operating system ကို 64-bit နဲ့ပါလျှင်စစ်ဆေးဤခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ.
မတူညီသောဒေါင်းလုပ်ဖိုင်အမျိုးအစားများနှင့် Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအကြားခြားနားချက်များအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤလင့်ခ်ကိုလိုက်နာပါ.
အချို့သောထုတ်ကုန်များ၏ယာဉ်မောင်း version ကို update လုပ်စေခြင်းငှါ. Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့ Adapter ကိုယာဉ်မောင်းဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
install လုပ်နည်း >>>
သင့် wireless adapter ကိုဒီကို download ကထောက်ခံကြောင်းသေချာစေရန် ကျေးဇူးပြု.. အောက်ပါလင့်ခ်ကြိုးမဲ့ adapter ကွန်ပျူတာ system အတွက် install လုပ်ပြီးသောအဆုံးအဖြတ်၌သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းနှင့် Atheros Qualcomm Driver Update ကို Utility ကိုအတူဆော့ဖျဝဲရှာဖွေပြီးကို update
သင့်ရဲ့ Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့ Adapter ကိုနှင့်ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းနံပါတ်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသတ်မှတ်.
ပံ့ပိုးမှု device ကို
ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HD Graphics ဥပဒေရေးရာအနက် 64-နည်းနည်းက Windows Samsung က device ကိုမော်ဒယ် စီပီယူ Nokia က မိုဘိုင်းဖုန်း Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ နည်းပညာ processor ​​ကို Intel က Software များ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ
စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု processor ​​ကို စီပီယူ Software များ Samsung ရဲ့ Galaxy HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ နည်းပညာ 64-နည်းနည်းက Windows စမတ်ဖုန်းများ Samsung က Nokia က OS ကို-STORE Intel က device ကိုမော်ဒယ် ပရိုဆက်ဆာ HTC က Qualcomm မှ မိုဘိုင်းဖုန်း Sony Ericsson က Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet